Diego Forlán oo uga digay Barcelona iyo Suarez halista kaga imaan karta kooxda Inter – Gool FM
Diego Forlán oo uga digay Barcelona iyo Suarez halista kaga imaan karta kooxda Inter
(Yurub) 30 Sebt 2019. Xiddigii hore xulka qaranka Uruguay ee Diego Forlán ayaa kaga digay hal arrin muhuum ah kooxda Barcelona iyo saaxiibkiis ay isku wadanka ka soo wada jeedaan ee Luis Suárez.
Diego Forlán ayaa uga digay Barcelona halista kaga imaan karta kooxdiisii hore ee Inter Milan inta lagu guda jiro kulanka labaad GROUP F ee tartanka Champions League ay habeenka Arbacada ku wada ciyaari doonaan garoonka Camp Nou.
Inter Milan ayaa ku guuleysatay xilli ciyaareedkan inay kaga bilaawato si wanaagsan, kaddib imaatinka macalinka reer Talyaani ee Antonio Conte, iyagoo awood u yeeshay inay ku hogaamiyaan horyaalka Talyaaniga 18 dhibcood, kaddib 6-dii kulan ugu horeysay ee laga ciyaaray.
Diego Forlán oo u soo ciyaaray kooxda Inter Milan xilli ciyaareedkii 2011-2012 ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “La Gazzetta dello Sport” ee dalka Talyaaniga wuxuu ku sheegay:
“Barcelona waxay la ciyaari doontaa Inter Milan, sidoo kale Luis Suárez wuxuu kahor imaan doonaa Diego Godín, wuxuu noqon doonaa kulan ay si adag ugu loolami doonaan labadan xiddig ee isku wadanka ah”.
“Diego Godín wuxuu heystaa khibrad aad u sareysa, waa hogaamiyaha kooxda ee xilligan, kooxda uu haatan hogaaminayo Antonio Conte waxay si aad ah ugu tiirsan tahay qorsho ciyaareedka ah saddex difaac ee dhanka gadaale, taasna wax badan ayay ka caawisay, wuxuu ka fiicnaan karaa sidii uu ku ahaa Spain”.
“Waxaan u maleynayaa in Inter ay ka yaabin karto Barcelona, Conte wuxuu si fiican u xoojiyay shaxda kooxdiisa suuqii xagaaga, bilaabashadooda horyaalka Serie A waa mid cajiib ah, laakiin Barcelona oo ku ciyaareysa garoonkeeda ayaa ah arrin aan lagu doodi Karin kulamada noocan oo kale ah”.
Tababare Solskjær oo sheegay hal arrin ay Manchester United u baahan tahay inay sameyso
Kooxda Barcelona oo bisha Janaayo doonaysa inay amaah ku qaadato mid ka mid ah xiddigaha sare ee Arsenal